Makicheni matema, maitiro ane hunhu | Bezzia
Makicheni matema, maitiro ane hunhu
Maria vazquez | 26/11/2021 18:00 | Simba
Uri kufunga kuchinja kicheni yako here? Wafunga kubheja pakicheni mune nhema? Dema ndiyo inosimuka parizvino mukicheni. Imwe nguva yapfuura vashoma vakashinga nemuvara uyu, asi nekukwira kwenzvimbo dzakavhurika, makicheni matema ave imwe nzira nehunhu.
Kicheni dema inomira kunze kwete nekuda kwehunhu hwayo hunorema asiwo kune yayo avant-garde aesthetics. Ichokwadi kuti vara iri rinoda nzvimbo hombe ine chiedza chakawanda kuti ripenye, asi hatifanire kusiya iri ruvara nekuti zvimwe zvezvinodiwa izvozvo zvinokundikana sezvauchaona pazasi.
1 Dema pane dema
2 Nuances mune mamwe mimvuri
Dema pane dema
Unoda kicheni nhema here? Kana square footage haisi dambudziko Usafunga nezvazvo! Dema ichapa kicheni mhepo yemuguta uye yemazuva ano, yakakwana yekuwedzera hunhu kune nzvimbo huru dzakavhurika dzaimbova dzisingashamisi.
Iyi mhando yekicheni ichapenya kunyanya kana iwe uchibheja fenicha mune matte toni. Ko kupokana, handiti? Aya ma toni parizvino anosarudzika kugadzira nzvimbo shoma umo fenicha inomira pachena nekuda kwekureruka kwayo uye midziyo yemagetsi inosanganisirwa mazviri kana zvakare akagadzirwa nemuvara uyu.
Makicheni matema anongowanikwa nzvimbo huru here? Kwete, kanganwa zvavanenge vakuudza! Kunyangwe iwe uine imwe kicheni kadiki unogona kubheja pane iyi ruvara. Kuti hongu, uchafanira vhenekera nzvimbo kupenda sirin'i nemadziro zvichena, kubheja pauriri hwakareruka uye kudzivisa kuisa makabati marefu. Iwo matema makabati anooneka anorema kwazvo uye nekuita pasina iwo iwe uchakwanisa kurerutsa zvakanyanya mukamuri.
Nuances mune mamwe mimvuri
Hauna kugutsikana nekubheja pane dema rose? Kana paine chinhu chakanaka pamusoro pedema, ndizvozvo inosanganiswa nezvose. Pair fenicha nhema nevamwe vachena kune yakagadziridzwa classic space. Enda kune grey kuunza zvazvino kana kusiyanisa dema nematoni ehuni kuti uwane nzvimbo inogamuchirwa.
Mutambo unounza a classic vein marble mukicheni nhema inonakidza. Isanganise mukicheni kumberi uye countertop kune yekare asi yakagadziridzwa nzvimbo. Iyi haisi iyo yega shandiso yekuputsa hegemony yekicheni nhema. Iwe unogona zvakare kubheja pane yakaderera fenicha kana chena chitsuwa. Uye usakanganwa nezvemashoko maduku; mamwe matauriro mumatoni egoridhe ndiwo anonyanya kubudirira pakupfekedza kicheni yako mutema.
Kana iwe uchitsvaga avant-garde kicheni, hauzokanganise kusanganisa dema negrey. Pane ruvara rwakawana akawanda manhamba mukati kupfuura grey mumakore gumi apfuura? Marble nemamwe matombo Iwo akanakisa sosi yekusuma mukicheni nhema, asi ndizvo zvakaita kongiri. Iwo ekutanga achaunza hukuru hukuru kukicheni, nepo kongiri ichadhinda yakasarudzika avant-garde uye maindasitiri kubata kwairi.
Imwe huru sosi inozobatsirawo kuvhenekera kicheni ndeyekubatanidza dema fenicha nevamwe mukati mumvuri wegrey, uchiisa izvi pamusoro. Sarudza fenicha ine minimalist aesthetic uye wedzera hupfumi kukicheni nekubatanidza zvinhu zvakasiyana senge quartz kana ceramics.
Ko dema rinoratidzika seruvara rinotonhora zvikuru renzvimbo yemhuri sekicheni? Huni inogona kukubatsira kuti iite zvakanaka. Zvese huni nehutema zvine simba rakakura rekushongedza, asi zvakasanganiswa zvinopindirana zvakakwana, kuwana nzvimbo ne yakaoma uye inodziya aesthetic.
Kune akawanda marudzi ehuni uye kunyangwe nguva pfupi yadarika ari iwo matanda akareruka, maitiro eNordic maitiro, ayo akanakidzwa nemukurumbira haasi iwo atinoti apedze kicheni nhema. Matanda ari pakati nepakati uye rima toni Vanoita sevanonyanyokodzera makicheni matema.
Base makabati mune dema uye makabati epamusoro muhuni Iyo tandem yausingakwanise kuenda nayo zvisizvo, asi kune zvimwe zvazvino uye zvine njodzi sarudzo. Tarisa mufananidzo uri pamusoro; Kubatanidza mamodule emavara ese ari maviri munzvimbo yepamusoro kana kusarudza fenicha yemapuranga kuchengetedza dema kumberi uye kicheni chitsuwa inzira dzakanakisa.
Unoda makicheni matema here? Ungashinga here nemuvara uyu?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Decoration » Simba » Makicheni matema, maitiro ane hunhu
Zvinhu zvishanu zvinofanira kuziva vechidiki nezvebonde
Mavhitaminzi nemaminerari anowedzera ndangariro uye kuisa pfungwa